BYTEMARK inopa mupiro wakakosha kuchirongwa cheDebian | Kubva kuLinux
BYTEMARK inopa mupiro wakakosha kuchirongwa cheDebian
Iyo purojekiti Debian yakazivisa izvozvo bytemark yakapa maseva gumi nematanhatu HP chipande ine modular yekuchengetera arrays ine 57TB yekuchengetedza. Iyo sevha nyowani inochengeterwa muBytemark's nyowani DataCenter muYork, England uye inokwana £ 150,000 pagore mukutengesa mazwi.
bytemark yakavakira maseva ayo pa Debian kubvira payakatanga kushanda muna 2002, chimwe chinhu chavanoti chaigara chiri chibvumirano chakanaka.
Nechiitiko ichi akaedza kudzorera chimwe chinhu Debian, kuwedzera pakutsigira DebConf uye uvhure yako pasuru yako «symbiosis»Kuita server kubata mabasa Debian nyore.
Hatigone kutsiva kuyedza kwezviuru zvevazvipiri veDebian, asi isu tinokwanisa kudada nekupa chikamu chakakura chezvivakwa zvavo.
Chipo ichi chinobvumidza timu yeDebian manejimendi kuti ipe zvirinani nzvimbo yekumisikidza masevhisi avo, kuvandudza kushivirira kwavo uye kuwanikwa. Iyo yekuwedzera yekuchengetera ichagadzirisawo matambudziko ehuremu, sezvo akawanda masevhisi akanyanya masevhisi anozoendeswa kumaseva eBytemark sechikamu cheiyi nzira yekubatanidza Tsanangudzo yeiyi maitiro inogona kuwanikwa pane yeDebian tsamba yekutumira.
Hardware yakapihwa na bytemark inoumbwa neiyo HP C7000 BladeSystem ine 16 mashizha evha:
12 BL495cG5 ine 2x Opteron 2347 uye 64GB ye RAM imwe neimwe
4 BL465cG7 ine 2x Opteron 6100 uye 128GB ye RAM imwe neimwe
Uye akawanda HP ekuchengetedza arrays:
6 MSA2000 masherufu ekuwedzera
Iine 108 yakazara mabhaji ekuchengetera, akawanda 500GB SATA anotyaira, mamwe 2TB, akawanda 600GB 15000 RPM SAS anotyaira, ehuwandu hwe57TB yekuchengetedza.
Ichi chinzvimbo parizvino chakaenzana nemakumi masere neshanu yazvino Debian dura kana ka80 nguva iyo snapshot yekuchengetedza. Asi isu hatifanire kukanganwa kuti mafaera ese ari maviri anogara ari mukukura kusingaperi.
mabviro: Bits | Inotorwa kubva kuiyo GUTL Yekutumira Chinyorwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » BYTEMARK inopa mupiro wakakosha kuchirongwa cheDebian
Hapana chikonzero chekushandisa Spanglish, kana izwi racho riripo kare mumutauro wedu.
Kana iri muduramazwi remutauro wechiSpanish, ichokwadi Spanish.
Chinyorwa chakakurudzirwa kudzimwa.
Ratidziro yemakumi maviri nematatu edition
anotsigira -ra. 1. '[Munhu kana sangano] rinotsigira kana kutsigira nemari chiitiko, kazhinji kuitira kushambadzira': ). Kuvapo kweiri izwi reSpanish kunoita kuti kushandiswa kweanotsigira Chirungu uye kutsigira kwayo kusakosha. Zvakaenzana zvisingabvumirwe ndezvinobva (e) zvinotsigira uye (e) tsigiro, vane tsika dzakaenzana muchiSpanish vari kutsigira uye kutsigira.
2. Munyika zhinji dzemuAmerica mazwi ekutsigira, kutsigira uye kutsigira anoshandiswa, zvakaenzana uye zvinokwanisika kuAnglicism: "Bato rakarongwa nemubatsiri wechikwata chako" (Nyika [Col.] 29.7.97); "Chiitiko ichi chinotsigirwa nebazi rezvetsika, vechidiki nemitambo" (Nación [C. Rica] 17.3.97); "Pasina basa kuedza kwekuwana rutsigiro rwemugadziri wemakamera uye marekodhi" (Dolina Ángel [Arg. 1993]).
Kwayaka: Panhispanic Duramazwi rekupokana. http://www.rae.es/dpd/
Zvese zviri zviviri uye chimwe chiri kushanda uye hachisi chikonzero chehurukuro, shandisa maforamu emitauro izvo.
0.0 ndidaidze ndisingazive ... ini ndanzwisisa chikamu chavakapa michina asi ... muchiSpanish, zvinobatsira sei Debian? zvakaparadzana handina kuzvinzwisisa hehehe
Mune maeseva akapihwa anozove ezvivakwa zveDebian. Zvirinani redundancy mune repos, kumwe kugadzirisa kumhanyisa kuvaka mapakeji, yega yega distro ine nhamba hombe yemaseva emabasa akasiyana.
oh ... ndatenda 😀
Carlos andres akadaro
Kunyanya kukanganisa kushivirira nekuva ne redundancy yemasevhisi mune imwe nzvimbo yenzvimbo uye nekuwedzera mamwe masimba ekuchengetedza.
Pindura carlos andres
Yakanaka kwaDebian. Sezvo isu tiri mune izvi, riini Debian 7?
Uye sezvo vaine maseva matsva, kumeso kune iro peji repamutemo hakugone kukuvadza.
Pindura kuna Leo
Kana zvese zvikafamba mushe, ndinofunga tichava nechiziviso chepamutemo mumavhiki 2. 50 bugs kana imwe yakafanana mari yasara kuti igadziriswe. Ndanga ndiinayo yakaiswa kuburikidza netinstall disk ndichiishandisa kubva Zvita uye handina kana dambudziko rimwe chete.
Pindura kuna Ruffus-
Ndakatarisa izvozvi: 38 bugs dzakawanikwa !!
Ichokwadi, yakafanana neiyo peji rePHP, iro rinotyisa peji, asi kunyangwe zvakadaro, ndiyo inonyanya kushandiswa mutauro wewebhu.
Kunyangwe hazvo iyo PHP peji iri "rinotyisa", rinoita basa raro nemazvo. Pese pandinotsvaga basa, ndinoriwana kekutanga. Uye zvese zvakanyatso nyorwa. Ndinoda mimwe mitauro yekuronga kuti iite zvakafanana neiyo PHP peji.
Zvakare iyo PHP haisi dhizaini. Chimiro chiri CSS.
Sponsori chii? Zvimwe ndomashanduriro akaita google. Kune mazwi mazhinji mumutauro wedu wakanaka kuyedza kushandura izwi kubva kuChirungu. Izvo hazvinzwika zvirinani kwauri: tsigira, tsigira, kusimudzira, kukurudzira? Kunyange zvakadaro, Mukati mahara ...
Pindura kune anopindura
Anoshamisa mupiro, ndinoshuva dai paine mamwe makambani anoda kutsigira debian.
Pane chero munhu anoziva kana Debian 7 ichibuda gore rino?
Zvinotaridza kuti kune mashoma kwazvo mabhugi akasara ekugadzirisa (50 yasara zvinoenderana na @ Ruffus- komenda pamusoro).
Ndinovimba ichabuda nekukurumidza 🙂
Yon Graterol (@yograterol) akadaro
Inzwa! Rupawo rwakanaka rwavakaita, huwandu hwakati wandei, tinovimba makambani mazhinji achaita zvakafanana, nekuti kunze kwevashandi, mari nemidziyo zvinodiwa kuchengetedza budiriro yemapurojekiti.
Pindura kuna Yohan Graterol (@yograterol)
Asi iwo maSeva ekare ... mune mashizha uye mune rack uye shongwe maseva vanoenda mumaG8 maseva pamwe neMSA2000 ndeyechinyakare Hardware (yazvino kwazvo ndiyo P2000 G3 uye iri kubva kumakore matatu apfuura).
Pakarepo chirongwa che post-garandi chinodhura.
Sezvo paine mapapa akawanda kupfuura Papa, rega kutumira uye ingoverenga. Pane zvakanaka kwazvo zvemukati pano.
Ngatione kana vachizivisa Debian 7 uye ini ndiri kukwanisa kuisa Nvidia nayo, chii chinounzwa neXfce nekukanganisa? Ndiri kufarira yazvino Darktable 1.2… uhm, isu tave kutoshuvira PPA….
Zvinoita kunge zvakakwana
PS: ndiani ane hanya nezvinotaurwa RAE. Nyora sezvaunoda
Izvi "nyora sezvaunoda" hazvizivi. Iwe unofanirwa kuedza kusimudzira mutauro wako, nekuti zvikasadaro mumwe munhu anogona kukudzvinyirira.
anti sars akadaro
Iyo RAE haisi mvumo, kana iwe ukai teerera kwairi nekuda kwako kwekuzvisarudzira uye nekuti iwe unoida iyo, asi haina anomiririra chero chiremera chinopfuura chokwadi chekuti vanhu vanoda kuiteerera nekuda kwekusaziva.
Ini ndinopokana zvakanyanya nezvisarudzo zveRAE, kunze kweizvozvo hazvimiriri chero chiremera kwandiri.
Pindura kuna anti rae
iyo RAE SI NDE repamutemo repamutemo muviri rinotarisira mutauro wechiSpanish.
Kuti shanduko dzekupedzisira dzaakaunza dzinoonekwa seBURRADA uye zvachose MEDIOCRE kudzikisira mutauro hazvibvise hunhu hwenhengo.
Ini ndinobvuma kuti zvinonyadzisa kuti vakagamuchira kutsauswa kwevanhu vanotaura chiSpanish muUS se "kunyoreswa" apo izwi chairo raigara riripo "kunyoreswa" nezvimwe zvakadaro, asi zvinosuwisa richiri iro repamutemo rinotonga mutauro wedu.
Officer ndiani? Kune vanhu veSpanish?
Neraki ndinogara kuAmerica, uye kuno haina hutongi kana masimba.
Chero zvazvingaitika, hapana munhu (kunyangwe vaSpanish) anosungirwa kuti azviise kuRAE, chero munhu anozviita anozvisarudzira.
Zvichida mangwana muvakidzani wako anenge aine rake rechikoro rechikoro uye vanhu vachasarudza iyo academy pane RAE. "Mutemo" weRAE hauna musoro zvachose.
Uye iyo RAE inogona kutaura zvinhu chiuru, asi kana vanhu vakasazviteerera, simba rekufungidzira uye hunhu hwayo zvine basa zvishoma.
Zvekuti vanhu vanozvifuratira, hazvibvise kuna rae, simba rayo, zvakafanana nehurumende, unogona kuzviteerera, asi kana mutemo ukati iyo pio, iri pio, saka unogona kuita chero chaunoda. Chimwe chinhu ndechekuti zvinoita sekunge ndinotadza kwazvo kuti zvakatorwa kubva kuCastilian, zvinoda kutaurira Castilian izvo zviri chaizvo.
Runyararo uye republic.
shamwari yakanaka, ngatisiye zvakadaro, kana iwe uchida kuzviisa pasi peanofungidzira masimba idambudziko rako.
PS: Mutauro wacho wakawanda sewe wako; uye ini handina kumboedza kutaura izvo chaizvo, ndakangonongedzera kuti RAE haina mvumo kupfuura vanhu vanozvipira kusarudza kuzviteerera.
Ehezve…, chero chaunoda, saka sezvo chiri chiremera chekufungidzira, tora bvunzo uchinyora chiCastilian sekuda kwako, wobva wandiudza kuti chii chaive mhedzisiro… .. Zvinofanira kufamba mushe? Zvese izvi zvisikwa hazvina mvumo yekutaura kunyora kana kutaura zvakanaka: D (irony)
"Chimwe chinhu ndechekuti zvinoita sekunge ndinokundikana kwazvo kuti zvakatorwa kubva kuSpanish zvinoda kutaurira chiSpanish chakarurama."
+1 kumashoko maviri aya.
eta vien, ke kada imwe ezcriva komo yaanoda, hah ci todoz noz understandmoz 🙂
Nezve nhau, kunyange ndisina kushandisa Debian kwenguva yakareba, ini ndine Arch uye openSuse, ndiri kufara nazvo, uku kugovera kukuru kunokodzera izvi nezvimwe.
ok fan weRAE, kuverenga duramazwi uye kushandisa win ****
Nhau dzakanaka dzipi dzandinoda Debian, ndine mbiri NAS nazvo 😀
Ngatione vana, ndatogadzirisa kashoma ikako .. 😛
Chinhu chinoshamisira kuna Debian kuti agamuchire mupiro wakakura kudaro!
Asi Debian yakakosha izvo uye nekuwedzera, iyo distro yakachengetedzwa chaizvo!
Ramba wakadaro ..
Pindura ku st0rmt4il
Chinyorwa chinodziya moyo.
Pakupedzisira nyika iri kutendeukira kune yakasimba solidism, runako rwakadii.
Hukuru. Zvinogutsa kuva nemhando dzakadai dzezvinhu izvo zvinokoshesa kuedza kwaDebian kuve yakakosha nharaunda distro mune yeLinux zvakasikwa.
Kuremekedza kwangu kunharaunda ino, pamwe nekudada kushandisa Iceweasel 20 pane yangu Debian Squeeze.
... ndinofungidzira kuti kumaseva vaizoshandisa yakakomba system, HP-UX semuenzaniso ...
[..] mukati […] ————--> iro ziso rakaipa
HP UX ndeye Intel itanium processor. Asi zvirokwazvo iyo "yakakomba" sisitimu yekushandisa ichashandiswa, DEBIAN inoshandiswa!
mashoko akanaka akadii. zvakanakisa
Sabayon uye qgtkstyle
Wedzera kumwe kushanda kune Firefox kubva pane iyo: config